TORITENYPosté par Ra-Hiandry jeu., mars 29, 2012 23:50:03
ALAHADY KAREMY-5, TAONA B
EVANJELY: Jn 12, 20-33
LOHAHEVITRA: Mba ho voninahitr’Andriamanitra Ray sy Zanaka avokoa (Evanjely)
no tanjona, na ho an’ny Fanekempihavanana vaovao (Vakiteny I),
na ny fiantorahana (abandon) sy fanekena lavorary niainan’i Jesoa (Vakiteny II).
VAKITENY VOALOHANY: Jer 31, 31-34
- Resaka Fanekempihavanana no hevi-dehibe voizin’ity Karemy ity.
* Fampitsiahivina fotsiny ihany raha miteny ity hevidehiben’ny “Fanekempihavanana” ity. Satria samy efa mahalala isika fa isaky ny alahadin’ny karemy, isaky ny vakiteny voalohany, dia miresaka “Fanekempihavanana” hatrany.
Eo ny Fanekempihavanana tamin’i Noe: “Manao fanekem-pihavanana aminareo Aho: tsy hisy levon’ny safo-drano intsony ny nofo rehetra, ary tsy hisy safo-drano handringana ny tany intsony.” (Karemy alahady-1),
Teo ny Fanekempihavanana tamin’i Abrahama: “Efa nianiana tamin’ny tenako aho, hoy Iaveh, fa noho hianao nanao izany dia hanisy soa anao aho, hahamaro ny taranakao tahaka ny kintana eny an-danitra sy ny fasika eny amoron-dranomasina.” (Karemy alahady-2),
Teo ny Fanekempihavanana tamin’i Moizy, tamin’ny alalan’ny Didy folo: “Izaho no Tompo Andriamanitrao,.... ho tia Ahy ianao, amin’ny fonao rehetra, amin’ny fanahinao rehetra, ary amin’ny herinao rehetra. Ary ho tia ny namanao....”. (Karemy Alahady faha-3).
Teo ny tamin’ny alahady heriny: Tsy mivadika amin’ny Fanekempihavanana nataony Andriamanitra na dia mihodina aminy isaky ny mihetsika aza ny olony. Manasazy tokoa Izy (mandefa sesitany), fa indrindra indrindra tsy manadino ny mamindra fo, rehefa tonga ny fotoana tsara (Karemy Alahady-4).
=> Raha mandeha ambaratonga toy izany àry ny fomba anatonan’Andriamanitra antsika, aoka koa mba hisy ambaratonga toy izany, miditra lalina hatrany, ho tonga any anaty fontsika lalina any, ny ezaka ataontsika amin’ity Karemy ity.
RAVAHO SY HAINGOY FANOLORANTENA HATRANY NY VAVAKA REHETRA...
mer., octobre 05, 2011 20:52:36
VAVAKA MILA HATSARAINA...
mer., octobre 05, 2011 20:50:46
NY VAVAKA: FANOLORANTENA VAO FANGATAHANA.
mer., octobre 05, 2011 17:18:14
"TSY TOMPONY ISIKA, FA MPAMERINDOHA" ETO AMIN'NY FIAINANA.
mar., octobre 04, 2011 11:37:41